भारतवासी गोर्खे र नेपालीभाषीहरुलाई तिल विश्वकर्माको पत्र « Sansar News
भारतवासी गोर्खे र नेपालीभाषीहरुलाई तिल विश्वकर्माको पत्र
११ असार २०७४, आईतवार ०८:०१
यतिबेला भारतमा रहेका नेपाली भाषीहरुको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा नेपाली पक्षबाट भएका समर्थन र विरोधका स्वरहरु सामाजिक सञ्जालमा बढेर गएका छन् भने नेपाली मिडियाहरु पनि तरङ्गित बनिरहेका छन् । सिमा सुवेदीको नाममा आएको एक भिडियो नेपाललाई होच्याउने हिसाबमा आएपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति भावनात्मक समर्थन गर्दै आएका नेपालीहरुमा आक्रोश बढेर गएको छ । यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि भारतको आसाममा रहँदै आएका तिल विश्वकर्माले नेपाल भाषाी गोर्खे र नेपाली समुदायको नाममा पत्र लेखेका छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रवासी समन्वय कमिटी भारतका प्रमुख समेत रहेका विश्वकर्माको पत्र यसप्रकार छ ।
प्रीय भारतवासी गोर्खे/नेपालीभाषी मित्रहरु,
तपाइहरुलाई थाहै होला इन्डियन आईडलका प्रशान्त तामाङलाई जिताउन देखि,सन १९८७ मा मेघालयमा नेपाली भाषीलाई लखेड्दा होओस वा मैई २०१० मा मेघलायको लाङ्पीको घटनाका बेला तथा भारतमा नेपालीभाषीको बारेमा नेपालका नेपालीको सद्भाव र ऐक्यबद्धता जनाउदै आएका छन । अर्को कुरा भारत भरी तपाइहरुको अवश्था कस्तो छ ? दुख नमान्नु होला । हेर्नुहोस नेपालीको उद्गम र उत्पत्ति नेपालबाट नै हो, अब पूर्वोत्तर भारतमा नेपालीको उपस्थिति कसैले भन्छन सन १९५१ लाई आधार बनाउने त कसैले भन्छन सन १९७१ लाई आधार बनाउने । तर मेरो बुझाईमा नेपाली हरुको भारतमा उपस्थित जहिलेबाट हिमालय पर्वत,गङगोत्री थियो, रामायण, महाभारतकाल बाट नै थियो । तर राजनैतिक रुपमा मिलिट्री ब्याकग्राउण्ड लाई नै आधार बनाउने हो भने पनि जहिले बाट ईष्ट-ईन्डिया कम्पनीको आगमन भयो तब देखि अहिले सम्मको उपस्थिति रहेको अबश्था रहेको छ । तर….भारतको नजरमा नेपालीभाषीलाई भारतमा अझै पनि सहजरुपमा भारतको भनेर स्वीकार नगरी सकेको हुनाले आज सम्म गोर्खाल्यान्डको मागलाई र नेपाली जातिलाई नेपाल कै हुन भन्ने बुझाई रहेको अवश्था छ ।
अनि अर्को प्रमुख कुरा, भारत १.३ करोड पपुलेसन भएको देशमा भारतभरीको नेपालीभाषीहरुको कुनै राजनैतिक मन्च ( platform) नै छैन । अत : दार्जिलिङ र असम बाहेक भारतको कुनै पनि राज्यमा नेपालीभाषीहरु एकत्रित रुपमा बसोवास गरेर बसेको अवश्था पनि छैन । यसकारण यो अवश्थामा भारतभरिका नेपालीहरु पनि उनीहरूको भविस्यको लागि दार्जिलिङ बाहेक अरु विकल्प नभएकोले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु बाहेक अरु विकल्प छैन । यो अवश्था देखेर नै पूर्वोत्तरका गोर्खे/ नेपालीहरुले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाको लागि नेपालको नागरिकता पनि लिएर नेपालमा पनि घर-घडेरीको व्यवस्था गरि सकेका छन र बङ्गालको सिलिगुडीमा घडेरी किनेर राख्ने र घर बनाएर समेत बसेका छन ।
त्यस बाहेक भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खे/ नेपालीको राजनैतिक प्रतिनिधित्व खोइ त ? न त लोकसभा न त कुनै विधानसभामा नै । हाम्रो पनि चाहना छ कि भारतमा रहेका नेपालीभाषीहरुको संबैधानिक,राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ । भोलि आवश्यक परे नेपाल गरिब भए पनि उ एउटा सार्वभौमसत्ता देश हो र उसले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा पनि यो मुद्दामा साथ र सहयोग गर्ने दिन र अवश्था आउन सक्छ । अत : हाम्रो साथ र सहयोग तपाइहरुको आवश्यकता हो नेपालको होइन । यसरी गाली गलौच गर्नु तपाईंहरुको महाभुल हो । हिजो भाषा र पहिरन थोपर्न खोज्दा भुटानबाट नेपालीभाषीलाई लखेटेर नेपालमा शरणार्थीको रुपमा बस्न पर्‍यो र नेपालले नै अन्तरास्ट्रिय फोरममा उनीहरुको सेटल्मेण्टको लागि पहल गर्‍यो र आज युरोपियन युनियनको सहयोग र अमेरिकामा शरणार्थीको रुपला एसाइलम लिएर बसेका छन । त्यसकारण नेपाल र नेपालीलाई अपमान नगर्नुहोस..! कौन जाने कल क्या होगा सिमा सुवेदी कल तुम भी नेपाल मे शरणार्थी के रुप मे शरण लेना ना पडे…!!!
नेपाल र नेपालीलाई गाली र अपमान गर्ने सिमा सुवेदी श्रेष्ठको लगभग ठाउँ-ठेगाना पत्ता लागि सकेको छ । उनी बाहुनकी छोरी लगभग भागी विवाह श्रेष्ठ जातिको केटा संग शिलाङको महादेव खोला मन्दिरमा भएको र एउटा छोरा पनि छ । उनको जन्म असमको बक्सा जिल्ला अन्तर्गत सुहागपुरमा भएको । सन २०१६ मा Mrs.India International मा सहभागी भएकी र हाल उनी मुम्बैमा बसोबास गर्छिन । उनको श्रीमान निखिल श्रेष्ठ अति मिलनसार र शिलाङ स्थित “शिलाङ क्लब “मा प्रमुख सेफको रुपमा काम गर्छन । सिमा सुवेदीको श्रीमानको काठमाडौंमा आफ्ना काका-कान्छाबाको रहेको र वहाँहरु होटल व्यावसाय गर्छन रे अनि यो सिमा सुवेदी पनि गत साल तीन महिना काठमाडौ बसेर आएकी रहेछ । यसको लागि भारतमा नै एउटा साम्प्रदाय र देशलाई गाली बेइज्जतीको र साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गरौ जस्तो लागेको छ, सबै नेपालीहरुको सुझाव सल्लाह चाहन्छु कसो होला मित्रहरु…?